Ifulethi eline-terrace nendawo yokubhukuda - I-Airbnb
Ifulethi eline-terrace nendawo yokubhukuda
Acireale, Sicily, i-Italy
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Francesca izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikamelo elibili, izinga lengadi, endaweni yokuhlala enendawo yokubhukuda, ingadi, ebheke ulwandle neNtaba i-Etna.
Izivakashi zingakhululeka echibini lokubhukuda ngenkathi zijabulela ukubuka iNtaba i-Etna kanye neqholo lolwandle.
i-Trinacria Ifulethi elihle endaweni yokuhlala enamafulethi aqoshiwe.
Ikamelo elibili lakhiwe ngekamelo elilala abantu ababili, ikamelo lokuhlala elisekhishini elinombhede owusofa (umuntu oyedwa), igumbi lokugezela langasese, uvulanda wangasese onetafula nezihlalo. Ifulethi lingamukela kahle abantu abadala abangu-3 noma abantu abadala abangu-2 nezingane ezimbili ezincane.
Ifulethi elisezingeni lengadi, elinombono omuhle weNtaba i-Etna, ulwandle nengadi yokuhlala.
Ifulethi linekhishi elinakho konke, i-air conditioning, i-TV. Ngesicelo sekhotheji nesihlalo esiphakeme sezingane.
4.63 · 66 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala edolobhaneni lase-St. Tecla of Acireale, idolobhana elincane labalimi nabadobi. Ngokuyinhloko kutshalwe i-citrus lemon kanye ne- "verdello" edumile, evamile yase-Sicily. Edolobhaneni uzothola konke okudingayo: i-supmarket, i-bakery, ugwayi, ihhovisi lokuposa, i-ice cream parlor, i-bar, ngaphandle kokukhuluma ngezindawo zokudlela eziningana kanye nama-pizzerias lapho ungajabulela khona izinhlobo ezihlukahlukene zokupheka.
Izinsizakalo zethu zihlanganisa ukuthi kungenzeka kube nezivumelwano nezindawo zokudlela namabhishi endaweni, ukudluliselwa nokuvakasha e-Etna noma ukuhamba ngomkhumbi, amabhayisikili nokunye okuningi ukuze wenze iholide lakho libe mnandi.
Nsuku zonke othile uzobe esendaweni yokuhlala ukuze akusize ngolwazi lwezokuvakasha noma yonke into oyidingayo.
Izinsizakalo zethu zihlanganisa ukuthi kungenzeka kube nezivumelwano nezindawo zokudlela namabhishi endaweni, ukudluliselwa nokuvakasha e-Etna noma ukuhamba ngomkhumbi, amabhayisik…